Sida loo dayactir iPhone Tallaabada Broken by Step
Options in dayactir iPhone Broken
dib u eegista 0 ilaa 0
Marka aad u baahan tahay si uu u xaliyo aad iPhone jabay, aad leedahay asal ahaan 5 fursadaha:
Under damaanad: haddii aad iPhone ka yar yahay damaanad, waxaa loola jeedaa in aad leedahay fursad aad u hesho iPhone aad jebiyey cusboonaysiiyey lacag la'aan ah, ama xataa beddelato mid cusub oo bilaash ah. Tani waxay dhacdaa keliya marka iPhone waa caadi ahayn ay sabab u tahay dhibaatooyin farsamo oo qaar ka mid ah.
Samee Isticmaalka AppleCare: AppleCare u iPhone fidiyaa caymiskaaga laba sano laga bilaabo taariikhda asalka ah ee alaabadaas aad iPhone iyo darayaa ilaa laba shil oo caymis dhaawac shil ah.
Sida loo beddel iPhone Battery
Marka aad nolosha batari iPhone noqdo badan oo ka sii dara ama aan aad ka heli kartaa waxa lagu eedeeyay, in aad u baahan tahay si uu u badalo batari iPhone hore iyo mid cusub. Waxa kaliya ee aad qaadataa 6-10 daqiiqo si aad u samaysay keligaa. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay soo iibsato bedelka batari, qalabka qaar ka mid ah iyo raacdo tutorial video ay u badasho batariyada ah.
Sida loo Dayactir Your jaban iPhone Screen
Guud ahaan, marka aad iPhone 5 ama 5S screen waa la jebiyey, waxaad u baahan tahay inuu bedeli doono shaashadda jebiyey mid cusub. Ha welwelin ku saabsan sida loo dhammayn sida hawl adag. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay soo iibsato screen cusub, qalabka qaar ka mid ah iyo raacdo tutorial ah tallaabo-tallaabo.
Waa wax aad looga xumaado marka aad button iPhone Home waa ku dhegto ama kaliftay. In kastoo ee macruufka 7, AssistiveTouch aad bixisaa button Home Samo falku inaad ah, kuwaas oo u shaqeeya la mid ah sida mid ku saabsan iPhone, mararka qaarkood, waxaad weli u baahan tahay inaad riix badhanka Home ah. Xaaladdan oo kale, aad qaban karto DIY si uu u bedelo button iPhone Home keligaa.
Sida loo Dayactir iPhone Power Button
Marka Power (Lock) badhanka on your iPhone uma shaqeeyo, ka dibna aad u leedahay in aad joojiso qaadashada iPhone, maxaa yeelay, idinku ma kartaa in aad iPhone quful. Haddii ay sidaas tahay, waa inaad raacdaa tutorial ah midkood si uu u xaliyo badhanka iPhone Power ama badalo button Power hore iyo mid cusub.
Haddii aad iPhone camera gadaal u geysto, halkii diraya dukaan dayactir deegaanka, waxaan kuu soo jeedinaynaa in lagu badalo camera gadaal waxyeelo keligaa. Waa mid aad u fudud. Kaliya talaabooyin fudud dhowr ah, oo aad ka saari kartaa waxyeelo iPhone camera gadaal iyo meel ka mid ah oo cusub.
Marka Guddoomiyaha gudaha iPhone ku guuldareysatay in ay ka shaqeeyaan, waxaad u tagi kartaa off Gacanta iyo Bluetooth si aad u hubiso in ay mar kale ama ma ka shaqeeya. Haddii aan, afhayeenka bahal ee laga yaabo in ay waxyeelo. Xaaladdan oo kale, waa in aad bedeli afhayeenka bahal hore iyo mid cusub.
Sida loo beddel iPhone 4 / 4s Screen Broken
Ma doonaysaa in ay bedeli shaashadda jabay oo aad iPhone 4s 4 ama mid cusub, laakiin weydid oo ka mid ah fursadaha buuxiyay shuruudaha aad? Xaaladdan oo kale, waxaa laga yaabaa inaad jeceshahay in ay isku dayaan keligaa. Casharrada Video iyo tallaabo-tallaabo ku Hanuuniyaa kaa caawin doona inaad si aad u hesho dhex proces ah.